Hjortenleden | Vakashela uHultsfred
umphetho » 🥾 Bona futhi wenze » 👟 Imisebenzi » U-Andra Ukuhamba » Umkhondo wenyamazane
E-Hjortenleden uhamba emigwaqeni enhle yobhuqu ngokusebenzisa izindawo zezolimo kanye nemizana, exutshwe nezindlela ezincane ezinqamula ehlathini. Udlulisa konke kusuka kwaKnallakorset, eNäcken kuya ezitshalweni zamandla kagesi kanye nezigayo. Uma ukhipha izingubo zokubhukuda, kungahle kube nethuba lokuzika echibini! Ungaqala ezindaweni ezahlukahlukene, zikhethe!
Zazise nganoma yikuphi ukuvinjelwa komlilo okwamanje. Ezimweni ezijwayelekile, ungabasa umlilo kodwa ungafaki amatshe noma amatshe bese uwucisha kahle umlilo.
Uma wenza ukujikajika ukubona iNäcken, kunendawo yokuhlala ukuze uthathe ikhefu elifanelekile.
Uma wenza futhi indlela eya eDackestupet, kunokuvikelwa komoya, indawo yokosa inyama kanye nombono omuhle.
E-Hjortöström kunendawo yokuhlala eduze kwamanzi.
Umzila wezinyamazane ku-Alltrails
Umzila wezinyamazane eGaia
Umzila wezinyamazane ku-Hiking Project
Umzila wezinyamazane e-Outdooractive
Umkhondo wenyamazane ebalazweni leMvelo
Umzila wezinyamazane ku-Wikiloc
IBjörkmossavägen 570 80, 570 80 I-Virserum, Sweden
4.7 aphume ku-5.0
3 izibuyekezo ku-Google
Umtapo Wezincwadi WaseSiberia